Igwe mbu nke mbu na Spain tinye ochichi 34 na nche | Netwọk Mgbasa Ozi
Okpomoku izizi na Spain tinyere mpaghara 34 na nche
Na-agafe agafe na-ekpo ọkụ? Ruo ụbọchị ole na ole okpomọkụ dị na Spain na-eru okpomọkụ nke a na-ahụkarị na Julaị na Ọgọstụ karịa ọkara nke abụọ nke June. Ọnọdụ okpomọkụ nke ga-eru 42 degrees Celsius n'ọtụtụ mpaghara, dịka ọ dị na ndịda Andalusia ma ọ bụ Castilla La-Mancha.
Agbanyeghị oge ọkọchị na-amalite na June 21, ọ dị ka afọ a dị ụbọchị isii n'ihu, nke bụ nsogbu, ọkachasị maka ụmụaka n'oge klaasị. Ike agwụla ụlọ akwụkwọ kemgbe noticia. Mgbe ọ dị ọkụ, ihe kachasị mkpa bụ ịjụ oyi, ọkachasị ma ụmụaka. Nke a bụ ihu igwe na Spain ụbọchị ndị a.
1 Kedu oge a na-atụ anya maka taa?
2 Na maka ụbọchị ole na ole sochirinụ?
3 Na na Canary Islands?
Kedu oge a na-atụ anya maka taa?
Oke amụma amụma kachasị na Friday June 16, 2017. Image - AEMET
Na June 14, thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na steeti nyere nyochaa: ebili mmiri nwere ike imetụta akụkụ anọ na ndịda ọdịda anyanwụ nke peninshula na etiti peninshula, na ogo nke puru omume karịa 80%. Bọchị mbido bụ June 15, na njedebe ụbọchị bụ Mọnde na-esote, June 19. Ya mere ọ dịla.
Taa na mpaghara Córdoba, Granada, Huelva, Jaén na Seville dị ugbu a na njikere oroma (ihe egwu dị egwu) n'ihi oke nke ga - agbanye n'etiti 38 na 41ºC, ebe na Cádiz enwere ihe ngosi edo edo (ihe egwu) maka ụkpụrụ nke 38ºC, n'ihi ikuku Levante na mpaghara nke Strait na n'ihi ihe ịtụnanya mmiri.
Castilla La-Mancha nwere ịdọ aka ná ntị oroma maka okpomọkụ nwere ike iru 40ºC na ndagwurugwu Tagus na Guadiana. N'akụkụ aka nke ọzọ, Madrid na-ekwusi ike oroma na obodo mepere emepe, na ụkpụrụ nwere ike ịbụ 39ºC; na en Extremadura gara n'ihu na ịdọ aka ná ntị oroma maka ihe kachasị nke 42ºC.
Na maka ụbọchị ole na ole sochirinụ?
Amụma ọnọdụ okpomọkụ maka Saturday June 17, 2017. Image - AEMET
Amụma ọnọdụ okpomọkụ maka Sunday June 18, 2017. Image - AEMET
N'ime ngwụsị izu ma na Iberian Peninsula na Balearic Islands ga-anọgide na-acha uhie uhie na-ekpo ọkụ. Na Saturday, okpomọkụ ga-anọgide na-arị elu na ugwu nke Peninsula, na Sọnde ha ga-ebili ntakịrị na Alto Ebro na mpaghara ndị ọzọ dị n'ebe ugwu. N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Balearic, okpomọkụ ga-amalite ịda.
Na na Canary Islands?
Agwaetiti ndabara o yiri ka ha na-ekpofu oke ọkụ ọkụ ọkụ ntakịrị. Ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị gburugburu 30-32ºC, ma opekempe bụ 10-12ºC. Enweghị nnukwu mgbanwe a na-atụ anya ụbọchị ndị a.
Yabụ ihe ọ bụla, ọtụtụ mmiri ma chere ka ebili mmiri gafere 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Okpomoku izizi na Spain tinyere mpaghara 34 na nche
Ihe omimi nke igwe ojii noctilucent ma ọ bụ CEN na Isi Ozo nke ikuku mmiri a:
June 15, 2017 - Na ngwụcha Mee 2017, ndị na-ekiri ya na Europe malitere ịhụ elendị na-acha anụnụ anụnụ na-amị amị gafee ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ. Oge ọkọchị nke igwe ojii noctilucent (CEN) na-amalite. Igwe ojii na-adịghị mma na-adịkarị na-eme ka ọhụhụ ha dị na izu ozugbo ha hụrụ ụzọ. Otú ọ dị, n’afọ a, ihe dị ịtụnanya mere. Utu ke ndisan̄a ke enyọn̄, obubịt enyọn̄ oro ama osop. N'ime izu abụọ mbụ nke June 2017, anatara ihe onyonyo efu sitere na CEN na Spaceweather.com - ihe na-emebeghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20.
Ebe ka ha gara? Ndị na-eme nchọpụta chọpụtara naanị: Enweela "ebili ọkụ" na mpaghara polar nke mesosphere, mpaghara dị na mbara ikuku ụwa ebe CEN dị. Ọnọdụ okpomọkụ dị ọkụ ekpochapụla igwe ojii.
Lynn Harvey nke Mahadum nke Mahadum nke Colorado maka ikuku na mbara igwe gbasara ihe ọmụmụ mere nchọta a site na iji data okpomọkụ sitere na Microwave Probe dị na satịlaịtị NASA nke NASA. "Na mbido Mee, oge ọkọchị nke ụzarị anwụ na-ajụ oyi, dịka ọ na-adịkarị, na-erute obere okpomọkụ achọrọ maka CEN," “Ma ị maghị? Naanị mgbe Mee 21st gasịrị, ọnọdụ jụrụ oyi dị na mbara igwe kwụsịrị na mgbago ugwu! N'ezie, ọ na-ekpo ọkụ site na mpaghara n'etiti ogo ma ọ bụ abụọ dị elu karịa izu na-abịa. Okpomoku a sụgharịrị na 2017 bụ oge ọkọchị kacha dị na mesopause n'afọ iri gara aga. "
Ọ na - akọwa usoro ihe na - acha uhie uhie n’ime afọ iri nke mgbanwe mgbanwe okpomoku polar mesospheric:
Okpomoku di elu a di elu di na CEN. Igwe ojii ice na-etolite 83 km n'elu ụwa mgbe ikuku ikuku gbadara n'okpuru 145 K (-128 C), na-enye ohere ka ụmụ irighiri mmiri na-ezukọ ma kpochaa n'ime anwụrụ ọkụ nke meteor. Ọbụna ogo ogo abụọ nke ikpo ọkụ zuru ezu iji bibie igwe ojii.
"Anyị amaghị ihe kpatara mesosphere ahụ jiri kpoo ọkụ, mana ndị na - egosi ya na - egosi mbịakwute nke mpụga Cosmic-Rays na Mbara Igwe," ka Cora Randall, onye isi oche Mahadum na Ngalaba Na-ahụ Maka mbara igwe na Ocean Sciences na-ekwu. “Eleghị anya ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya nke gụnyekwara mgbasa nke ebili mmiri ndọda nke ikuku, nke na-emetụta nrugharị nke ikuku na mbara elu. Anyị na-ele ya anya ya mere o jikọtara ya na Solar-Cycle dị ugbu a nke dị ala dị ala ".
Ka ọ dị ugbu a, ikuku ọkụ ahụ nwere ike ịbịa na njedebe. "N'izu gara aga, mesopause nke north north amalitela jụụ ọzọ," ka Harvey na-ekwu. Nke a pụtara na CEN tupu ịlaghachi ga-agbake ngwa ngwa, ebe ọ bụ na okpomọkụ na-aga n'ihu na mpaghara ahụ ikuku ikuku ugwu. Ndị na-ekiri igwe dị na mbara igwe kwesịrị ịnọ na nche maka mgbagharị eletrik na-apụ site na ọdịda anyanwụ na abalị ndị na-esote oge ọkọchị.
Zaghachi ANTHONY LOPEZ
Mmefu ego iji lụọ ọgụ mgbanwe ihu igwe site na 16%
Kedu ihe bụ oge anwụ solstice?